रुस र अमेरिकाको अन्धानुकरण छोडौँ, बी.पी.ले देखाएको तेस्रो बाटो हिँडौँः प्रदिप गिरि - हिमाल दैनिक
मङ्ल, चैत्र २५, २०७६
राजनीति, विचार, संसद विशेष
रुस र अमेरिकाको अन्धानुकरण छोडौँ, बी.पी.ले देखाएको तेस्रो बाटो हिँडौँः प्रदिप गिरि
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:०८
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले अमेरिका, रुस लगायतका पूँजीवाद र साम्यवादी बाटोभन्दा पृथक बी.पी. कोइरालाले अघि सारेको अवधारणाका आधारमा तेस्रो बाटो अंगाल्न राजनीतिक दल र नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस नेता गिरिले कांग्रेसका संस्थापक नेता बी.पी. कोइरालाको १०६औँ जन्मजयन्तिका अवसरमा उनले अघि सारेको मानव हितको बाटोबारे सदनमार्फत सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रस्तुत छ सांसद प्रदिप गिरिले व्यक्त गरेको विचारः
आजकै दिन आजभन्दा १०५ वर्षअघि यस नेपालमा एउटा मनुष्यको जन्म भएको थियो। उहाँको नाम थियो विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला।
नेपाली समाजमा उहाँलाई महामानव भन्ने पनि चलन छ। आजको यो देशमा उहाँलाई म आफ्नो श्रृद्धासुमन टक्र्याउन चाहन्छु। त्यतिमात्रै होइन, खास उहाँको ऐतिहासिक महत्व किन हो? किन यस संसदले उहाँका प्रति साँच्चै नै श्रृद्धा र आभार पेश गर्नु पर्दछ भन्ने कुरातर्फ संकेत गर्न चाहन्छु।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जीवन नेपाली इतिहासमा खुला किताब जस्तै छ। उहाँको जन्म, उहाँका पिताको प्रताडना, हिन्दुस्तानको आजादी आन्दोलनमा भाग लिनु भएको तथ्य, त्यसपछि राणा शासनको विरुद्धमा गर्नु भएको संघर्ष, त्यसपछि राजा त्रिभुवनको महत्वाकांक्षाका विरुद्ध कानुन र शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्नु भएको लडाई, १५ सालको आम चुनाव त्यसपछि राजा महन्द्रद्धारा ८ वर्ष कैद र त्यसपछि अर्को ८ वर्षको निर्वासन। यी सब कुरा करिब करिब हामीलाई थाहा छ।
म थोरै सौभाग्यशाली युवकहरुमध्ये एक हुँ, जसले उहाँसँग थोरै सहकार्य गर्ने मौका पनि पाएँको हुँ र उहाँको जीवनलाई मैले नजिकबाट हेर्ने सौभाग्य पाएँ।
म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, सारा इतिहासका निमित्त उहाँ स्मरणीय हुनुहुन्छ। भाषाको ठिक ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने स्मरणीय होइन प्रातःस्मरणीय हुनुहुन्छ। यो भन्दा पनि धेरै महत्वपूर्ण कुरा बी.पी.को जीवनमा आजको मितिमा आजको नेपाललाई चाहिएको एउटा केन्द्रिय अवधारणा छ।
आज नेपालमा विद्यमान रहेको नेपालको संविधानले आफूलाई समाजवादउन्मुख भनेर घोषणा गरेको छ। बी.पी. कोइरालाले आजिवन आफूलाई समाजवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यहि दिशामा उहाँको अध्ययन, उहाँको प्रशिक्षण, लेख र पढाई केन्द्रित रहे।
म यस सम्मानीत संसदलाई सम्माननीय सभामुखका माध्यमबाट सरोकार राख्ने सबैलाई विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, प्रधानमन्त्री लगायतलाई आजका दिनमा एक पटक बी.पी. कोइरालाको अबदानलाई सम्झिनका लागि नम्र प्रार्थना गर्दछु।
बी.पी.को सुदीर्घ ऐतिहासिक जीवनको एउटा यस्तो तिथिको उल्लेख गर्न चाहन्छ, जो मेरो नजरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। राणाशाहीको कालकोठरीमा आमरण अनसन गरेको तिथि त्यो होेइन। १५ सालको चुनावपछि गिरफ्तार भएको तिथि त्यो होइन। १९५३ मा उहाँ एशियाली समाजवादी सम्मेलनको स्थापना गर्नेक्रममा रंगुन पुग्नु भएको थियो। आफ्ना अनन्य सहयोगी कृष्णप्रसाद भट्टराई र आफ्नी धर्र्मपत्नी सुशीला कोइरालासमेतलाई लिएर उहाँले एशियाली समाजवादी सम्मेलनको स्थापना र त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नु भएको थियो।
यो आज मैले भन्नु किन परेको छ भने, यहाँ विकासको कुरा भइराखेको छ। चीन र भारतको विकासको कुरा भइराखेको छ। तिनिहरुको आर्थिक बृद्धिदरको कुरा भइराखेको छ। अमेरिका र हिँजोको रुसले उन्नती गरेको कुरा हुँदैछ।
म विनम्रतापूर्वक उल्लेख गर्न चाहन्छु, बी.पी. समाजवादको त्यो धाराको प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्थ्यो जसले बारम्बार त्यो भन्यो विकास भनेको, प्रगति भनेको, समाजवाद भनेको मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने कुरा हो।
बी.पी.को उद्धरण धेरैलाई याद होलाः विकास एउटा आर्थिक प्रक्रिया होइन। म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छुः विकास एउटा आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन। विकास एउटा मानविय प्रक्रिया हो। मनुष्यलाई बलियो नगराउँन्जेल, यहाँका उत्पिडितलाई अधिकार नदिउँन्जेल यीनिहरु सबैको गास, बास, कपास र शिक्षाको व्यवस्था नगरुन्जेल समाजवादका नाउँमा यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्ने हवाई कुराको कुनै मतलब छैन।
बी.पी.ले यो कुरा भन्नु भएको १९५३ मा हो। त्यसपछि आज झण्डैझण्डै ७० वर्ष पुग्न आँटीसक्यो। ७० वर्षमा विश्वले कोल्टे फेरेको छ। कुनै समय विश्व समाजवादको राजधानी ठहरिएको सोभियत युनियन भंग भएको छ।
लगत्तै पछि चीन माओ त्से तुङको सिद्धान्तलाई छोडेर, म दोहोर्याएर भन्दैछु, माओवादलाई छोडेर विकासको नाउँमा एउटा पूँजीवादको अन्धानक्कलकरण गरेर आत्मघाती बाटोमा जाँदैछ। त्यतिबेला बी.पी.ले एशियाली समाजवादी सम्मेलनमा दुई÷चार वटा कुरा भन्नु भएको थियो।
त्यो सम्झना गराउँन उठेको छु। कुनै विकास, कुनै पनि समाजवाद वा कुनै पनि साम्यवाद मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नु पर्छ। मनुष्य साध्य हो साधन होइन। केही हुँदैन, विकास हुँदैछ, दुई÷चार जना मान्छे मरे मरुन्, दुई÷चार वटा महिला बलकृत भए बलकृत हुन् भन्न पाइँदैन। प्रत्येक मनुष्य साध्य हो, बी.पीको त्यो मान्यता थियो।
बी.पी.को त्यहि मान्यतालाई अगाडि बढाउँदै उहाँका सहकर्मीहरुले, भारतका सहकर्मीहरुः जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, जस्ता सहकर्मीहरुले विशाल सिद्धान्तको एउटा भण्डार खडा गरेका छन्।
विश्वमा आज विकासको वैकल्पिक बाटोमा हिँडौँ भन्ने माग छ। बी.पी.ले बारम्बार भन्नु भयोः विकासको पश्चिमी नक्कल गरेर, फोर्ड प्रणाली नक्कल गरेर, अमेरिकन सिष्टम नम्कल गरेर, तत्कालिन अवस्थामा रुसको सिष्टम नक्कल गरेर नेपाल आफ्नो बाटोमा पुग्न सक्दैन।
यो के भनेको हो? म नेपालका पिएचडीलाई, डाक्टरलाई, बुद्धिजीवीलाई, विद्धानलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रवादीलाई, राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा मनन् गर्न अनुरोध गर्दछु।
अब समयको अभाव छ। तीन वटा कुरा बी.पी.ले जहिलेपनि जोड दिनुभयो। पहिले, देवकोटाका शब्दमा भन्ने हो भनेः चहराई रहेका आर्तहरुको घाउमा मलम लगाउ। प्रत्येक व्यक्तिका आँखाको आँसु सुकोस्। त्यसलाई विकासको नाउँमा नबढोस्। बी.पी.ले भन्नुभएको थियोः गाउँमा एउटा गाई होस् पचास वर्षमा कहाँबाट कहाँ पोगोस्। अब गाउँको कुरा रहेन। मुख्य कुरा भन्ने के खोजेको हुँ भनेः गाउँमा रहेको बेरोजगारी, बेरोजगारीमात्र होइन, अर्धबेरोजगारी, त्यो मात्र होइन, गुप्तबेरोजगारी यी तीनवटालाई सम्बोधन गर्नुहोस्। यी बृद्धहरुको नाउँमा ठूल्ठूला हवाईजहाज, ठूल्ठूला एयरपोर्ट, बी.पी.का शब्द हुन् मेरा शब्द होइन। ठूल्ठूला मनोरेल, ठूल्ठूला जहाजका कुरा गरिकन जनतालाई भ्रमित नबनाउँनुहोस्।
बारम्बार भनिन्छः उत्पादनवीना वितरण हुँदैन। यो एकदम सहि कुरा हो। यो बी.पी.मा पनि भेटिन्छ। उत्पादनवीना वितरण हुँदैन तर, के को उत्पादन? अन्नमा परनिर्भर, दूधमा परनिर्भर, फलफूलमा परनिर्भर, कपडामा परनिर्भर तर, गाउँका श्रमिक बेकार छन्। विप्रेषणको पैसा लिएर खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ।
आर्थिक नीतिको वैकल्पिक बाटो बी.पी. कोइरालाको रचनामा छ। दुर्भग्यवस् लामो समयसम्म हाम्रो पार्टीको शासन हुँदा पनि हामीले बी.पीका विचारलाई समुचित स्थान दिन सकेनौँ। समय पनि त्यस्तै थियो। भूमण्डलीकरणको बाढीमा सोभियत युनियन विघटनको भोलिपल्ट कोहीपनि सायद बजारबादको बाटोबाट हट्न सक्दैनथ्यो।
मनमोहन अधिकारीको सरकार पनि हटेन, गिरिजावावुको सरकार पनि हटेन। तर, अहिले आएर हामीले यो ४० वर्षमा देख्दैछौँ, तथाकथित बृद्धहरुको नाउँमा हामी कहाँ पुग्दैछौँ? त्यसैले आज बी.पी.का अन्य महानतालाई आफ्नै ठाउँमा पूजा गर्दै म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भनेः बी.पी. कोइरालाले देखाउनु भएको वैकल्पिक विकासको बाटोको तर्फ यस सरकारले सोचोस् र सर्वप्रथम मुलुकमा रोजगार, सशासन कायम गरोस्। र मुलुकलाई अनाहक ऋणको बोझमा पारेर, अनाहक सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्डको सपना देखाएर होइन नेपाललाई नेपाल बनाउने संकल्पमा मुलुकलाई लैजाओस्।
त्यहि आशाले पञ्चायतकालको लामो परम्परा, बिचको अवधिका अलमलका विरुद्धमा वर्तमान सरकारले जनाधिकार÷मताधिकार पाएको छ।
आज बी.पी.लाई सम्झिकन म चाहन्छु, यस संसदले पनि उहाँकाप्रति सम्मान गरोस्। बी.पी. कुनै दलको नेता होइन, बी.पी. सिंगो मुलुकको नेता हुनुहुन्छ। संसदले सम्मान गर्ने क्रममा हामीले कमसेकम बी.पी.को विचारको अध्ययन गर्ने एउटा सुरुवात गरौँ। बी.पी. मात्रै होइन, मनमोहनको गरौँ, पुष्पलालको गरौँ र नेपाललाई साँच्चै नै तेस्रो बाटो देखाउँ।
यो पूँजीवादको बाटो पनि चल्दैन। यसको अनुकरण भन्दा अलग साम्यवादको बाटो पनि चल्दैन। सोभियत रुस, चीन, अमेरिका, भारतको विकासको रँगमँगमा हामी नरङ्मगिउँ सभामुख महोदय।
त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। बाटो लामो छ तर, जस्तै लामो बाटो पनि पहिलो डेगबाट सुरु हुन्छ। यहि भनिकन म आफ्ना यी शब्द बी.पी. कोइरालाको श्रद्धाञ्जलीमा सिध्याइकन विदा हुन्छ।
Prevपछिल्लोइन्द्रजात्रा पर्व शुरु
अघिल्लोभिडियो कन्फरेन्स मार्फत बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइनको शुभारम्भNext
एनसेल करछली प्रकरणलाई संघर्ष र आन्दोलनको मुद्दा बनाउँछौँः कमल थापा
वायोग्याँस प्रवद्र्धनको अवसर र चुनौती सम्बन्धि एकदिने कार्यशाला सम्पन्न
हवाई यात्रामा भाडा छुटको फण्डाः हवाई मालिकको पक्षपोषण यात्रुमाथि डण्डा
लमजुङलाई केन्द्रबिन्दु भएर ४.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प
राप्ती नदी तर्ने क्रममा बगेर बेपत्ता
Copyright © 2020 हिमाल दैनिक | Powered by Astra